Dr. Xaawa Cabdi Halyeeyad Nafteeda U Hortay Nolosha Bulshada Soomaalida | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Muqdisho(ANN)-Haweenayda Caanka ku ahayd samafalka iyo taageerada bulshada, gaar ahaan kuwa jilicsan ee aan awooddin inay mareeyaan daryeelkooda caafimaad iyo noloshooda, ayaa ku geeriyootay shalay magaalada Muqdisho.
Dr. Xaawa Cabdi, oo ahayd Hooyo u adeegta bulshadeeda, isla markaana u badheedhay inay nafteeda iyo nolosheeda u hurto sidii ay ugu adeegi layd bulshada markii ay burburtay Soomaaliya.
Kaaliintii ay ku lahayd horrumarinta caafimaadka iyo nolosha Bulshada waxa warbintan ka diyaarisay Idaacadda BBC laanteeda afsoomaaliga.
“Hooyadey waxay ahayd saaxiibtey, nolosheyda. Saaxiib aan iyada ahayn ma lahayn, lataliye aan iyada ahayn ma qabin”, ayey tidhi Aamina Aadan oo ay dhashay Dr. Xaawa Cabdi oo BBC Somali la hadashay Arbacadii.
Xaawa Cabdi ayaa sheegtay in dadka qaar ee xilligaas aannay aaminsanayn isbitaalka. “Waxaan qaadan jirnay baabuur, waxaanna israaci jirnay dad caafimaadka yaqaano”, ayey tiri.
Waxay sheegtay: “Waan isla soo shaqeynay. Meesha (xarunta Xaawa Cabdi) ban tababarka ku soo qaatay. Umuliso waan noqday, qeybna waan maamulayay. Umad badan bay wax u soo qabatay, Soomaali oo dhanna way u gargaartay”, ayey tiri.
Xigashada Sawirka, Getty Images/Dimitrios Kambouris
Qoraalka sawirka, Dr. Xaawa Cabdi iyo labadeeda gabdhood, Deeqa iyo Aamina – sawirka waa 2010-kii abaalmarinta Glamour ee New York lagu gudoonsiiyay
“Qofna iskama tirtiri karo waxa uu yahay. Dalka waan jeclaa, meel kale oo aan ku noolaan karo dunida in ay jirtaba ilama noqonin. Nafteyda keligeed in aan badbaadsado, anigoo intaas oo qof ay hoostayda joogto, way ila cuslaatay. Waxaan jeclaa in intii joogtay iyo anigaba in aan isla badbaadno.
Xigashada Sawirka, Getty Images/Kuni Takahashi
Qoraalka sawirka, Muddaii colaadaha iyo abaaraha ay jireen, waxay ku sugnayd dalka, waxayna ka shaqeyneysay gargaarka iyo caafimaadka
Dr Xaawa Cabdi oo lahadashay BBC Somali, sannadkii 2013-kii
“Anigoo dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga kasoo hoos bixiyay nin aan soo gaddiyay”
Xaawa Cabdi waxaa lagu tilmaamay qof udub-dhexaad u ahaa Soomaaliya xilli ay dhibaatooyiin badan ay dalka ka jireen.
Qoraalka sawirka, Xaawa Cabdi, xarunteeda u dhexeyso Afgooye iyo Muqdisho ee dumarka iyo carruurta ay ku daweyn jirtay ayaa weli shaqeysa.
Hadda DHAF waxay ka kooban tahayCusbitaal, iskuul iyo xarunta quudinta. Waxay bixisaa aqoon, daryeel caafimaad iyo hoy iyo tababaro la siiyo dadka barakacay ee u badan haween iyo carruur.